izoyikiso zokhuselo kunye nohlaselo lweevenkile
Eyona Ukhuseleko Izisongelo zoKhuseleko kunye neeVectors zokuhlasela
Izisongelo zoKhuseleko kunye neeVectors zokuhlasela
Kule posi siza kufunda malunga nokuba kutheni ukuhlaselwa kwe-cyber kusenzeka, zeziphi iinjongo zabaphangi, ukuhlelwa kwezisongelo kunye neeveki ezahlukeneyo zokuhlasela.
Kutheni kuhlaselwa nge-cyber?
Ukuthetha nje ngokubanzi, ulwazi olubaluleke ngakumbi, kokuphakamisa izoyikiso kunye namathuba okuhlaselwa.
Ukoyikiswa kukhuseleko kubhekisa kuyo nayiphi na into enokubangela umonakalo kwinkqubo. Nokuba ziyenzeka okanye azenzeki ayibalulekanga njengeyokuba zinamandla amakhulu okukhokelela kuhlaselo lwenkqubo okanye uthungelwano. Ke ngoko, izoyikiso zokhuselo azifanele zithathwe lula.
Uhlaselo lokhuseleko (uhlaselo lwe-cyber) -bhekisa kumzamo wokufumana ukufikelela okungagunyaziswanga kwinkqubo okanye kwinethiwekhi.
Iinjongo ezibangela ukuhlaselwa nge-Intanethi
Ukufikelela kulwazi oluxabisekileyo kuhlala kusisizathu sokuba umphangi enze uhlaselo.
Kuxhomekeka ekubeni ngabagculeli bafuna ukwenza ntoni, iinjongo zinokwahluka, kodwa ngokubanzi isiseko sazo zonke iinjongo kukufikelela kulwazi oluxabisekileyo.
Ke, sinokugqiba ukuba injongo ivela kwingcinga yokuba inkqubo inolwazi olugciniweyo olugciniweyo kwaye ngenxa yoko kukujolisa kuhlaselo.
Injongo yohlaselo kwinkqubo
Oku kuxhomekeke kwi-hacker njengesiqhelo. Wonke umgculeli uneenkolelo, iinjongo kunye nezakhono zakhe. Nangona kunjalo, ezinye zezizathu eziqhelekileyo zokuhlaselwa kwe-cyber zezi:
Ukuphazamisa ukuhamba kwemisebenzi yeshishini kunye neenkqubo
Ukuba ulwazi oluxabisekileyo
Ukuba imali nolwazi olubalulekileyo lwezemali
Nje ukuba umhlaseli abe neenjongo zakhe, banokuqhubeka nokufumana izixhobo ezifanelekileyo kunye nendlela yokuxhaphaza ukuba sesichengeni kwenkqubo ekujolise kuyo emva koko bahlasele. Oku kunokumelwa ngolu hlobo lulandelayo:
Ngaba abagcini bakufumana njani ukufikelela kwiinkqubo kunye neenethiwekhi?
Iindlela ekuthi ngazo ngabagculi bahambise umthwalo kwiinkqubo kunye neenethiwekhi zibizwa ngokuba ziivenkile zokuhlasela.
Abahlaseli basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuhlasela ukuze bafumane ukufikelela kwiinkqubo kunye neenethiwekhi.
Ukusongelwa ngamafu kwiKhompyutha
Ikhompyuter yelifu ibhekisa kunikezelo lwezixhobo ezifunwayo ngaphezulu kwe-intanethi apho abasebenzisi bahlawulela khona kwaye basebenzise kangakanani izixhobo.
Abasebenzisi basebenzisa amafu ukugcina ulwazi lwabo kubandakanya ulwazi olubuthathaka, ngokukodwa kwimeko yeenkampani.
Ngaphandle kwezibonelelo ezininzi eziza nekhompyuter yelifu kwitafile, kukho iingxaki ezithile ekusebenziseni ikhompyutha yefu, ngakumbi xa ukhuseleko lukhona.
Ezinye zezoyikiso zekhompyuter yelifu zibandakanya:
Ukuba ulwazi kwabanye abasebenzisi belifu ibhekisa kwizoyikiso zangaphakathi apho abasebenzi abaneenjongo ezimbi bekopa ulwazi kwisixhobo sokugcina
Ukulahleka kwedatha ibhekisa ekususeni idatha egcinwe kwilifu ngokusebenzisa iintsholongwane kunye ne-malware.
Ukuhlaselwa kolwazi olubuthathaka ibhekisa kubaphangi abangena emafini kwaye beba ulwazi malunga nabanye abasebenzisi. Olo lwazi luhlala lubandakanya amanani ekhadi letyala kunye nolunye ulwazi lwezezimali.
Izisongelo eziqhubela phambili
Olu hlobo lokuhlaselwa lubhekisa ekubeni ulwazi ngaphandle kokujolisa kuhlaselo.
Injongo yolu hlaselo kukweba ulwazi oluninzi ngangokunokwenzeka kunye nokuhlala ungafumaneki ixesha elide kangangoko kunokwenzeka.
Ngokwesiqhelo, amaxhoba kolu hlaselo ngoorhulumente neenkampani ezinkulu.
Iintsholongwane kunye neentshulube
Intsholongwane luhlobo lwesoftware enobungozi eyilelwe ukuziphindaphinda kwezinye iinkqubo kunye namaxwebhu kumatshini osulelekileyo.
Iintsholongwane zisasazeka kwezinye iikhompyuter ngokudluliselwa kweefayile okanye iinkqubo ezosulelekileyo.
I-Worm ikwaluhlobo lwe-malware kwaye, njengentsholongwane, iyaziphindaphinda kwiinkqubo kunye namaxwebhu kumatshini wexhoba.
Umahluko kukuba iimpethu azidingi kuncedo ekusasazeni kwezinye iikhompyuter. Endaweni yoko, iintshulube zenzelwe ukuxhaphaza ukuba sesichengeni koomatshini bexhoba zize zisasazeke kwezinye iikhompyuter njengoko iifayile ezinesifo zigqithiselwa. Basebenzisa uqhagamshelo lwenethiwekhi ukusasaza ngakumbi.
Iintsholongwane kunye neentshulube zinakho ukosulela iinkqubo kunye nothungelwano kwimizuzwana nje.
I-Ransomware luhlobo lwe-malware apho abahlaseli bathintela ukufikelela kwiifayile kunye neefolda kwinkqubo ekujolise kuyo de kwenziwe intlawulo.
Amaxhoba ahlala efuneka ukuba ahlawule isixa esithile semali ukuze akwazi ukufikelela kwiifayile zawo.
Olu hlobo lokuhlaselwa luthatha ithuba lokungabikho kolawulo kulawulo kwii-smartphones, ezisetyenziswa ngakumbi kwimicimbi yabucala kunye neyeshishini.
Ngokusebenzisa ii-malware izicelo ezithunyelwe kwiithagethi 'ii-smartphones, abahlaseli banokulandela umkhondo weethagethi zabo kunye nemisebenzi yabo.
Iibhothi ziinkqubo ezinobungozi ezisetyenziswa ngabagculi ukulawula oomatshini abosulelekileyo.
Abagculi basebenzisa i-bots ukwenza imisebenzi enobungozi evela koomatshini abasebenza kwi-bots.
Nje ukuba umatshini wosulelwe, abahlaseli banokusebenzisa loo bot ukulawula ikhompyuter nokwenza uhlaselo kwezinye iikhompyuter.
Abagculi bahlala basebenzisa i-bots ukosulela oomatshini abaninzi, ukwenza i-botnet abanokuthi bayisebenzise ukusasaza ukwala ukuhlaselwa kwenkonzo.
Olu hlobo lokuhlaselwa lwenziwa ngumntu osuka kumbutho ogunyazise ukufikelela.
Olu hlobo lokuhlaselwa lubhekisa kubagculi basebenzisa ii-imeyile ezikhohlisayo ukuqokelela ulwazi lomntu okanye lweakhawunti.
Abagculi basebenzisa ii-imeyile ukusasaza amakhonkco amabi kumzamo wokweba ulwazi lomntu.
Olu hlobo lokuhlaselwa lisebenzisa ikhowudi ebhalwe gwenxa kunye nokusilela kokuqinisekiswa okufanelekileyo kwidatha yokufaka kunye neyokuphuma.
Olunye olu hlaselo lubandakanya inaliti ye-SQL kunye nesikripthi sendawo enqamlezileyo.
Olu hlobo lokuhlaselwa luthatha ithuba lokunqongophala kweendlela zokhuseleko kwizixhobo ze-IoT ngenxa yezithintelo ezahlukeneyo zekhompyuter.
Kuba ezo zixhobo zidityaniswe kwi-Intanethi kungabikho manyathelo okhuseleko amiselweyo, izixhobo ze-IoT zisengozini kwaye zinokuhlaselwa lula.
Izisongelo zinokuhlelwa ngokweendidi ezintathu:
Inethiwekhi yiseti yeekhompyuter kunye nezixhobo zehardware eziqhagamshelwe ngamajelo onxibelelwano.
Ezi ndlela zonxibelelwano zenza ukuba iikhompyuter kunye nezinye izixhobo zehardware zinxibelelane kwaye zitshintshisane ngolwazi.
Ulwazi luhamba ngejelo lonxibelelwano elidibanisa iinkqubo ezimbini, kwaye ngeli xesha lotshintshiselwano lolwazi umgwebi unokungena kwisitishi kwaye ebe ulwazi olutshintshisanayo.
Izisongelo zenethiwekhi zibandakanya:
Ukuphika ukuhlaselwa kweNkonzo
Uhlaselo olusekwe kwiphasiwedi
Uhlaselo oluphambili lwezitshixo
Uhlaselo lomlilo kunye ne-IDS
I-DNS kunye ne-ARP yetyhefu
Indoda kuhlaselo oluphakathi
Isongelo sokubamba sibhekisa kuhlaselo lwenkqubo ethile kwilinge lokufumana ukufikelela kulwazi oluhlala kwinkqubo.
Izisongelo zokubamba zibandakanya:
Uhlaselo lwegama eligqithisiweyo
Ukuphunyezwa kwekhowudi ngokungafanelekanga
Isongelo sesicelo sibhekisa ekusebenziseni ubungozi obukhoyo kwisicelo ngenxa yokunqongophala kwamanyathelo okhuseleko afanelekileyo kwisicelo.
Izisongelo zesicelo zezi:
Ukuqinisekiswa kokufaka okungalunganga
Ukulungiswa okungalunganga kokhuseleko
Ukusetyenziswa okufihliweyo kwentsimi
Ulawulo lweseshoni eyaphukileyo
Umcimbi wokuphuphuma kwesidambisi
Abagculi baneendlela ezininzi ezahlukeneyo zokuhlasela inkqubo, kwaye zonke zixhomekeke kwinto enye kwaye oko sesichengeni senkqubo. Ke, ukuze uhlaselo lwenziwe, kufuneka ufumane ukuba semngciphekweni onokuxhatshazwa.
Uhlaselo lungohlulwa ngokwamacandelo amane:
Ukuhlaselwa kweNkqubo yokuSebenza
Ukuhlaselwa kwenqanaba lesicelo
Shwabanisa iKhowudi yokuhlaselwa
Iinkqubo zokusebenza bezisoloko zinomdla kubahlaseli abasoloko bezama ukufumana nokuxhaphaza ubungozi be-OS ukuze bakwazi ukufikelela kwinkqubo ekujoliswe kuyo okanye kwinethiwekhi.
Ngenani elikhulayo leempawu kunye nokuntsonkotha kwenkqubo, ukusebenza kweenkqubo kule mihla kuxhomekeke ekubeni sesichengeni kwaye kunomdla kubaphangi.
Ngenxa yokuntsokotha kwenkqubo kunye nothungelwano, ngumceli mngeni ukukhusela iinkqubo kuhlaselo oluzayo. Ukulungiswa okushushu kunye neepatches kunokusetyenziswa, kodwa ngelo xesha lihlala lixesha okanye kube kusonjululwa ingxaki enye.
Ke ngoko, ukukhusela inkqubo kuhlaselo lwe-OS kufuna ukubekwa esweni rhoqo kwenethiwekhi kunye nokwaziswa malunga neendlela zamvanje kule ndawo yolwazi kunye nobungcali.
Ezi zilandelayo zezinye zeenkqubo zokusebenza ezisengozini kunye nohlaselo:
Iinkqubo zokusebenza ezingafakwanga
Ukuxhaphaza ukuphunyezwa komgaqo othile wenethiwekhi
Ukuhlaselwa kweenkqubo zokungqinisisa
Ukuqhekeka amagama okugqitha
Ukwaphula ukhuseleko lwenkqubo yeefayile
Uhlaselo olungalunganga lwenzeka xa isigebenga sifumana ukufikelela kwinkqubo engakhange iqwalasele ukhuseleko.
Olu hlaselo luvumela abahlaseli ukuba bafikelele kwinkqubo kunye neefayile zayo, kwaye benze iintshukumo ezimbi. Obu buthathaka bunefuthe kwinethiwekhi, koovimba beenkcukacha, kwiiseva zewebhu, njl.
Ngenani elihlala lisanda leempawu eziceliweyo kunye nexesha elibekiweyo, izicelo kule mihla zithambekele ekubeni sesichengeni ngenxa yokungakwazi kwabaphuhlisi ukuvavanya ikhowudi ngokufanelekileyo.
Njengoko inani leempawu kunye nokusebenza kukhula, nawo ngokunjalo amathuba okuba semngciphekweni.
Abagculi basebenzisa izixhobo ezahlukeneyo kunye nobuchule ukuze bafumane kwaye baxhaphaze obu buthathaka kwaye ke bafumane ukufikelela kulwazi lwesicelo.
Olunye lolona hlaselo luqhelekileyo lokufaka inqanaba lesicelo lubandakanya:
Ukuxelwa kolwazi olubuthathaka
Uhlaselo oluphuphumayo lweBuff
Ukuchitha ixesha elininzi kunye nemali encinci ekuphuhliseni isoftware entsha, abadwelisi benkqubo basebenzisa iilayibrari zasimahla kunye nekhowudi egunyazisiweyo evela kwimithombo eyahlukeneyo.
Kuba abatshintshi iilayibrari kunye nekhowudi abayisebenzisileyo, isixa esikhulu sekhowudi yenkqubo sihlala sinye.
Ukuba i-hacker iyakwazi ukufumana ubungozi kule khowudi, oko kunokubangela iingxaki ezininzi.
Ke kuyacetyiswa ukuba uhlale ukhangela ikhowudi kwaye ukuba kunokwenzeka uyicofe kancinci.
Imfazwe yolwazi lwale mihla
Imfazwe yolwazi ibandakanya ukusetyenziswa kunye nolawulo lwetekhnoloji yolwazi kunye nonxibelelwano ukuze ufumane inzuzo ngaphezulu kwabakhuphisana nabo.
Izixhobo ezisetyenziswa kwimfazwe yolwazi zibandakanya izixhobo ezahlukeneyo kunye neendlela ezinje ngeentsholongwane, amahashe eTrojan, kunye nokungena ngaphakathi.
Imfazwe yolwazi inokwahlulwa ngokwamacandelo aliqela:
Ukulawula nokulawula imfazwe
Imfazwe esekwe kubukrelekrele
Elinye lala macandelo linamaqhinga okhuselayo kunye nokuzikhusela:
Iindlela ezichasayo zibhekisa kuhlaselo lomchasi
Iindlela zokuzikhusela zibhekisa kumanyathelo athathiweyo ngokuchasene nohlaselo
Kutheni le nto kufuneka ucinge kwakhona ngokuthenga i-iPhone 12
Nantsi indlela yokwenza ukuba iAdobe Flash ixhase kwi-Android 5.0 Lollipop
Amaxabiso eSamsung kunye neapos; s Galaxy S20 Ultra yokutshintsha amaxabiso aphumile, kwaye eyona Buyi ayisiyonto yokulungisa
UGoogle uyacima ukudlala iVenkile yoMculo, abasebenzisi bacetyiswa ukuba batshintshele kumculo ku-YouTube
I-OnePlus 9 iyathengiswa ngexabiso elimangalisayo nge-12GB ye-RAM kunye ne-256GB yokugcina
Ukuba ufuna ukukhusela ifowuni yakho ye-Android nge-anti-virus app, kuya kufuneka ulandele umthetho omnye olula